Maxaad Ka Damacsantahay Noloshaada? |
Waa Maxay Barakacayaal (IDPs) |Tukesomalis.com
Cabdijabaar Sh. Axmed — November 28, 2015
Waxaa macquul ah inaad wali garani la dahay waxaad ka damacsantahay noloshaada!. Ma tihid shaqsigii ugu horeeyay oo aan aqoonin wuxuu ka damacsanyahay nolosha. Nolosha waxay u baahantahay in loo sameeyo halka ay hiigsanayso. Ogaaw marwalbo waxaad u baahantahay inaad la tashato shaqsiyado adiga wax ku tari karo haddii ay noqoto tallo mise dhinac kalle oo aad ka yar jawantahay.
Waxaa wanaagsan inaad noloshaada taqaano halka ay ku socoto iyo sawabta ay ugu socoto. Ku dadaal inaad tahay shaqsigii ay sugaysay bulshadaada. Bulsho walbo waxaa kasoo dhex baxo shaqsiyado gaar ah oo jecel wanaagsa iyo horumarka bulshadiisa.
Bulshada shaqsiyaadka ay ku faanto waxaa ka mid ah mid aqlaaqdiisa iyo dadnimadiisa laga helay. Balse hadii aad tahay shaqsi dhibaateeyo bulshadiisa cid ku jeclaanayso ma jiraan. Haddii aad doonayso inaad horumar nolosha ka sameyso isku day inaad marka horre noqoto shaqsi yaqaano meesha uu hiigsanaayo.
Ogaaw marwalbo oo aad taqanaao halka aad hiigsanayso waxaa suurta gal ah inaad fahanto nolosha guud ahaanteeda. Marwalbo isku day inaad ogaato waxa aad u nooshahay. Nolosha waxaa la soo deriso dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin jiro, waxbarasho la’aan, firaaqo la’aan iwm.
Hadba sidda aad u fakerayso ayay isku bedeshaa noloshaada. Haddii aad doonayso in noloshaada isbedesho marka horre bedel qaababka aad u fakirto. Micnaha hadalkayga ayaa ah, haddii aad ku fakirayso inaad wax un cunto hamigaada oo dhan wuxuu noqonayaa inaad raadiso siddii aad wax ku cuni laheed waana cudur aad u xun.
Ku canaano noloshaada inay noqoto mid taqaano halka ay hiigsanayso iyo waxaad ka damacsantahay. U qorshee noloshaada, mustaqbalka dhaw iyo midka dheerba.
Noqo shaqsi ay ku faanto bulshadiisa, haddii ay noqto mid aqlaaq ahaan, dadaal wanaagsan, waxbarashada iyo guud ahaan waxwalbo oo kobcini karo bulshadaada. Ogaaw shaqsi walbo oo dunidda ka mid ah wuxuu ka dhashay qoys oo asal ahaanta kasoo farcamay bulshada aad ku dhexnooshahay.
Haddii aad ku dhexnooshahay qurbaha ogaaw micnihiisa ma ahan inaad wada hilmaamto dadkaada iyo dalkaada. Dalka iyo dadkuba dhammaanteena waxaa naga wada saaran mas’uuliyad adag, qaasatan Soomaaliya marka ay noqoto uguma sii jirto, maxaa yeelay waa dal iyo dad u baahan in si cilmiyeysan dib loo dhiso.
Next post In La Dhiso Tayada Ciidan Ee Dalka Uu Leeyahay Waa Laga Maar-maan
Previous post Quruxda Bar-baarinta Ubadka